Vaovao - Taorian'ny ampahany amin'ny efijery fampisehoana finday, aiza no handehanana ny fahombiazan'ny efijery fampisehoana finday
Aorian'ny fizarana ny efijery fampisehoana finday, aiza no handehanan'ny fahombiazan'ny efijery fampisehoana finday
Ny habeny dia làlana manan-danja hatrany amin'ny fampivoarana ny efijery finday, fa ny telefaona finday misy 6.5 santimetatra dia tsy mety amin'ny tanany iray. Noho izany, tsy sarotra ny manohy manitatra ny haben'ny efijery, fa ny ankamaroan'ny marika finday dia namela ny fanandramana toy izany. Ahoana ny fomba hanaovana lahatsoratra amin'ny efijery voafaritra? Noho izany, lasa laharam-pahamehana indrindra ny fampitomboana ny haben'ny efijery.
Aiza no handehanana ny fahombiazan'ny efijery finday aorian'ny haben'ny efijery
Ny foto-kevitry ny fizarana amin'ny efijery dia tsy vaovao. Marika maro no nitantara momba an'io lafiny io hatramin'ny taona vitsivitsy voalohany nanombohan'ny telefaona finday. Saingy, tamin'izany fotoana izany, ny ampahany amin'ny efijery dia mihoatra ny 60% fotsiny, fa ankehitriny ny fisian'ny efijery feno dia mahatonga ny ampahany amin'ny efijery finday mihoatra ny 90%. Mba hanatsarana ny ampahany amin'ny efijery dia miseho eny an-tsena ny famolavolana fakan-tsary miakatra. Mazava ho azy, ny ampahany amin'ny efijery dia nanjary làlana lehibe indrindra amin'ny fanatsarana ny efijery finday tato anatin'ny roa taona.
Ny finday feno dia lasa malaza, saingy misy fetrany hanatsara ny haben'ny efijery
Na izany aza, miharihary ny bottleneck amin'ny fanatsarana ny haben'ny efijery. Ahoana no hivoaran'ny efijery finday amin'ny ho avy? Raha mandinika ny fandinihana isika dia hahita fa ny làlan'ny famahana dia efa rakotry ny tsilo efa ela. Ny efijery finday 2K dia ampy, ary tsy misy vokany miharihary amin'ny haben'ny 6,5 santimetatra misy famahana 4K. Tsy misy toerana ho an'ny fandrosoana amin'ny habeny, ny famahana ary ny fizarana amin'ny efijery. Misy fantsona miloko iray sisa ve?
Mihevitra ny mpanoratra fa ny efijery finday ho avy dia hiova amin'ny lafiny roa amin'ny fitaovana sy ny rafitra. Tsy hiresaka momba ny efijery feno izahay. Izany no fironana ankapobeny. Amin'ny ho avy, ny telefaona finday rehetra amin'ny fidirana dia hasiana efijery feno. Andao hiresaka tari-dalana vaovao.
OLED PK qled fitaovana lasa lalana fanavaozana
Miaraka amin'ny fivelarana mitohy ny efijery OLED, lasa mahazatra ny fampiharana ny efijery OLED amin'ny telefaona finday. Raha ny marina, ny efijery OLED dia niseho tamin'ny finday taona vitsy lasa izay. Ny olona mahalala an'i HTC dia tokony hahatsiaro fa ny HTC one s dia mampiasa efijery OLED, ary i Samsung dia manana telefaona finday maro izay mampiasa efijery OLED. Na izany aza, ny efijery OLED dia tsy matotra tamin'izany fotoana izany, ary ny fampisehoana loko dia tsy tonga lafatra, izay nanome ny olona fahatsapana "make-up mavesatra" foana. Raha ny marina, izany dia satria tsy mitovy ny fiainan'ny akora OLED, ary samy hafa ny ain'ny akora OLED misy loko fototra isan-karazany, noho izany ny ampahany amin'ny akora OLED vetivety dia betsaka kokoa, ka misy fiantraikany amin'ny fahombiazan'ny loko amin'ny ankapobeny.
Ny telefaona HTC one s dia efa mampiasa efijery OLED
Hafa izao. Mihalasa ny écran OLED ary mihena ny vidiny. Raha ny zava-misy ankehitriny, miaraka amin'ny paoma sy ny karazan-telefaona fampiasa rehetra amin'ny efijery OLED, ny fampandrosoana ny indostria OLED dia saika hanafaingana. Amin'ny ho avy, ny efijery OLED dia hanao fandrosoana lehibe amin'ny lafiny vokatra sy vidiny. Amin'ny ho avy dia ny fironana ankapobeny amin'ny finday avo lenta no manolo ny efijery OLED.
Amin'izao fotoana izao dia mitombo ny isan'ny telefaona efijery OLED
Ho fanampin'ny efijery OLED dia misy efijery qled. Ireo karazana efijery roa dia fitaovana mamirapiratra manokana, fa ny famirapiratan'ny efijery qled dia avo kokoa, izay afaka manao mangarahara kokoa ny sary. Eo ambanin'ny fampisehoana gamut miloko iray ihany, ny efijery qled dia manana ny vokany "mahasarika maso".
Raha lazaina amin'ny fomba somary mifangaro, ny fikarohana sy ny fivoaran'ny efijery qled dia taraiky ankehitriny. Na dia misy fahitalavitra qled aza eny an-tsena dia teknolojia mampiasa fitaovana qled hanaovana modely backlight izy ary mamorona rafitra backlight vaovao amin'ny alàlan'ny excitation LED manga, izay tsy efijery qled tena izy. Betsaka ny olona tsy dia mazava momba an'io. Amin'izao fotoana izao, marika marobe no nanomboka nandinika ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny efijery qled tena izy. Naminany ny mpanoratra fa ity karazana efijery ity dia toa ampiharina voalohany amin'ny efijery finday.
Mila hamarinina ny tari-dàlana fanandramana farany momba ny fampiharana aforeto
Andao izao hiresaka momba ny fanamboarana. Vao tsy ela akory izay, ny filohan'ny Samsung dia nanambara fa ny fampiasa finday voalohany azo avahana dia hivoaka amin'ny faran'ny taona. Yu Chengdong, tale jeneralin'ny orinasan-mpanjifa ao Huawei, dia nilaza koa fa ny fikandrana finday an-telefaona dia ao anatin'ny drafitr'i Huawei, araka ny filazan'ny magazine German. Moa ve ny fampifangaroana ny làlan'ny fampandrosoana ny finday amin'ny ho avy?
Na ny endrika finday mivalona dia malaza dia mbola mila hamarinina
Ny efijery OLED dia malefaka. Na izany aza, ny teknolojia ny substrate malefaka dia tsy matotra. Ny efijery OLED izay hitantsika dia rindrambaiko fisaka indrindra. Ny finday mivalona dia mila efijery mora miovaova, izay manatsara be ny fahasarotana amin'ny famokarana lamba. Na dia misy aza ny takelaka toy izany amin'izao fotoana izao, dia tsy misy fiantohana ny famatsiana ampy.
Manantena aho fa tsy ho lasa be mpanaraka ny finday mivalona
Saingy ny efijery LCD nentim-paharazana dia tsy afaka mahatratra efijery miovaova, amin'ny effets sur curved ihany. Fampisehoana E-fanatanjahantena maro no endrika miolikolika, raha ny marina, efijery LCD no ampiasain'izy ireo. Fa ny telefaona miolakolaka dia voaporofo fa tsy mety amin'ny tsena. Samsung sy LG dia nandefa telefaona finday miolakolaka, saingy tsy dia lehibe ny valin'ny tsena. Ny fampiasana ny efijery LCD hanaovana finday mivalona dia tsy maintsy manana zaitra, izay hisy fiatraikany lehibe amin'ny traikefan'ny mpanjifa.
Mihevitra ny mpanoratra fa ny telefaona mivalona mbola mila efijery OLED, fa na dia milamina aza ny fandrindrana telefaona finday dia mety ho soloina finday nentim-paharazana ihany io. Noho ny vidiny lafo, ny fisehoan-javatra tsy mazava amin'ny fampiharana, ary ny fahasarotana amin'ny famokarana vokatra, dia tsy ho lasa mainstream toy ny efijery feno.
Raha ny marina, ny hevitra momba ny efijery feno dia ny làlana mahazatra hatrany. Ny votoatin'ny zaridaina amin'ny efijery dia ny manandrana manatsara ny vokatra aseho amin'ny habaka habe iray rehefa tsy afaka manitatra ny haben'ny telefaona finday. Miaraka amin'ny lazan'ny vokatra feno amin'ny efijery feno, ny efijery feno dia tsy ho lasa teboka mahaliana atsy ho atsy, satria maro ny vokatra eo amin'ny sehatry ny fidirana no manomboka manamboatra ny famolavolana lamba manontolo. Noho izany, amin'ny ho avy, ny fitaovana sy ny rafitry ny efijery dia mila ovaina mba hanohizana ny famelana ny efijery finday hanana fanasongadinana vaovao. Ho fanampin'izany, misy teknolojia maro izay afaka manampy ny telefaona finday hanitatra ny vokatra aseho, toy ny teknolojia projection, ny teknolojia 3D maso, sns., Saingy ireo teknolojia ireo dia tsy fisian'ny tranga fampiharana ilaina, ary ny teknolojia dia tsy matotra, ka afaka tsy ho lasa lalam-be amin'ny ho avy.